Home Wararka Duqa magalaada Garowe oo amar dul dhigay xolaaha ku dayacan magalaada
Duqa caasimadda Garoowe, Axmed Siciid Muuse, ayaa amar ku bixiyay in laga bilaabo maanta oo Sabti ah Garoowe laga saaro xoolaha ku dayacan gudaha magaalada. “Laga bilaabo Sabtida 19 Juun waxaa magaalada laga saarayaa xoolaha ku dayacan” ayuu yiri duqa degmada Garoowe.
Sidoo kale, wuxu dadweynaha ka codsaday, in ay gacan-siiyaan shaqaalaha iyo ciidanka dowladda hoose u xil-saartay fulinta hawshaas. “Waxaan ka codsanaynaa dadweynaha inay gacan siiyaan hawlwadeenada iyo ciidanka hawshaas loo xilsaaray”.
Tallaabadan ayaa ku soo beegmatay, iyadoo Garoowe uu ka socdo barnaamijka cagaarinta caasimadda, kaas oo la doonayo in dhir badan lagu beero magaalada si loo hagaajo bilicdeeda.
Previous articleAL-shabaab oo weerar rogaal-celis ah ku qaaday deegaanka Biya Cadde
Next articleArdayda Somaliland oo maanta u fariisanaysa Imtixaanka Shahaadiga
(AKHRISO) Qodobo ka mid ah Xeerka doorashooyinka oo loogudbiyay Golaha Shacabka